Isku Tasho”Shacabka Koonfur Galbeedoow” By: Sheikhnor A Qaasim. – idalenews.com
Isku Tasho”Shacabka Koonfur Galbeedoow” By: Sheikhnor A Qaasim.
Madaxweynha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, mudane Madoowe Nuunow Maxamed ayaa waxa uu soo saaray wareegto lagu hirgelinayo barnaamish loogu magacdaray ISKUTASHO. Tasoo ay dadwaynaha ka qayb qaadanayaan howlaha hotumarinta goboladda Koonfur galbeed Soomaaliya.
Sidoo kale Dowladda Koofur Galbeed waxay gudoonsatay siyaasad loogu magac daray ISKUTASHO oo micnaheedu yahay in la abuuro hab dhaqaale ku dhisan deeq bixin, is xilqaanka dadwaynaa oo ah “ISKAA WAX U QABSO” Si looga maarmo dowlado ajanabi ah oo lug ku yeesha siyaasadda gobolka.
Hadaba, waxaan kula talinayaa walaalaha Soomaaliyeed ee ka soo jeedo degaanka Koofur Galbeed inay isku xilqaamaan aruurinta lagacta lagu wadi lahaa Dowladda koofur Galbeed, waayo waxaan aaminsanahay inaan ka maarmi karno gacan hoorsi ajanabi, sabatoo ah waxaan ognahay xooga ay leeyihiin shacabwaynaha Koofur Galbeed inay la garab istaagaan Dowladda curdunka ah, waxaa hubaal ah maanta inay taagan tahay yaan loo kala harin.
Waxaan ka codsanayaa qurbo joogtadda, qaasatan gabdhaha ku nool aduunka dhinaciisa kasta inay hore u wadaan garab istaagii lagu dhisay dowladaan, waxaan marnaba sooroobi lahayn, inay goboladaas ay yeeshaan maamul ayaga u gaar ah hadeeysan jirin gabdhaha ka soo jeedo Kuufur Galbeed. Waxaana hubaal ah inay taariikhda idin xusi doono markale.
Waxaa kaloo amaan mudan gacansatadda reer Koofur Galbeed oo kaalin wayn ka qaatay garab istaaga xaq u dirirka ah ee Gogoshii Baydhabo, waxaan markale ka codsaneeynaa inaad sii wadaan dadaalkiina ku aadan ” DIIDMO DULMI”.
W/Q: Sheikhnor A Qaasim.
Hoos u dhac ku yimid Ganacsiga Suuqa “EASTLEIGH”